Ingabe Ukhona Ofuna Ask.com? | Martech Zone
Ingabe Ukhona Ofuna Ask.com?
ULwesine, April 26, 2007 NgoLwesibili, Novemba 5, 2019 Douglas Karr
Kungenzeka ukuthi uqaphele kwesinye sezixhumanisi zami zakamuva ukuthi Ask.com futhi Live ujoyine i- Ama-sitemaps okujwayelekile. Igama elithi imephu yesayithi liyazichaza - kuyindlela yezinjini zokusesha ukwenza ibalazwe lakho kalula. Amamephu esayithi akhiwe ku- XML ukuze zisetshenziswe kalula ngohlelo. Ngine- ishidi lesitayela lisetshenziswe kumephu yami yesayithi ukuze ukwazi ukubona ukuthi yiluphi ulwazi oluqukethwe.
Amamephu wesayithi ne-WordPress
With WordPress, kulula ukwenza ngokuzenzakalela nokwakha amamephu wakho wesayithi. Vele ufake ifayela le- I-Google Sitemap Plugin. Ngisebenzisa inguqulo ye-3.0b6 ye-plugin futhi iyamnandi. Ngisanda kuguqula i-plugin futhi ngangeza nokuxhaswa kwe-Ask.com kokuhambisa. Ngithumele ushintsho lwami kunjiniyela futhi ngiyethemba ukuthi uzobangeza bese ekhipha uhlobo olulandelayo.
Ukuhambisa imephu yakho yesayithi ku- Ask.com
Ungahambisa imephu yakho yesayithi ku- Ask.com ngokwenza ithuluzi labo lokuhambisa isayithi:
Ngangijabule ukubona lokhu futhi ngokushesha ngafaka isiza sami futhi ngaqala ukusebenza ekuguqulweni kwe-plugin. Ngiyazi ukuthi i-Ask.com isanda kulungisa ikhasi labo lasekhaya futhi ngathola umshini othile wokucabanga ngakho-ke bengicabanga ukuthi kuzoholela ethrafikhi eyengeziwe.
Ngaphezulu kokuhambela kwami ​​kwansuku zonke kuvela -Google kepha angikaze ngibone isivakashi esisodwa kusuka Ask.com! Ngibona ukugeleza kwe- Yahoo! izivakashi kanye nabambalwa Live izivakashi… kodwa azikho izivakashi ze-Ask.com. Ekubukeni eminye yemiphumela yosesho lwe-Ask.com, eminingi yayo ibukeka ikhulile impela… indala kakhulu (kwesinye isikhathi inonyaka ubudala) izinkomba zegama lami elidala lesizinda nama-athikili amadala. Mhlawumbe lesi yisizathu esiyinhloko esenza i-Ask.com ingatholi noma iyiphi ithrafikhi? Ngabe ukhona kini osebenzisa i-Ask.com?
Yini i-RSS? Yini okuphakelayo? Siyini Isiteshi?
Amathiphu Amahlanu Angajwayelekile Wokuphinda kabili Ukukhiqiza Kwakho
Ngo-Apr 26, i-2007 ku-11: i-20 PM
Izikhathi ezimbalwa zokugcina engizame ngazo ask.com, angikhiqizanga imiphumela emihle kakhulu yokusesha. Izixhumanisi eziningi elizivezile kungenzeka ukuthi azisekho noma sezindala impela. Bengingazi ukuthi noma ubani usebenzisa noma yini KODWA uGoogle. Okungenani zikhomba njalo.
Wow, usezingeni elihle leTechnorati. Lokho kunzima ukuza.
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-6: 49 AM
I-tie yokugcina engizame ukuyibuza okokuqala ngqa ngibona lezo zikhangiso zabo zenkawu. Ngithole lapho ukuthi imiphumela abayibuyisayo ayiyinhle. Kuyathakazelisa ukuthi iTechorati ayibathathi njengosesho oluphezulu kakhulu. Ungasesha isizinda sakho ku-Ask, bese ubheka i-Technorati nge-URL yemiphumela. Ngeke ikuqhume ungene kwabangu-100 abaphezulu, kepha iyi-backlink yamahhala yeTechnorati!
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-3: i-31 PM
Ngithola ama-hits ayi-5 kuye kwayi-10 asuka kubuza.com nsuku zonke (kubhulogi lami lakudala)… futhi konke endimeni efanayo… ..
Ake sibheke ukuthi ngabe le nto yemephu yesayithi iyasithuthukisa isimo sethu 🙂
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-6: i-35 PM
Ake ungitshele ngakho.
Ngicabanga ukuthi ithrafikhi eya kumabhulogi ami yiGoogle ngokudilika komhlaba, i-yahoo futhi isesha bukhoma isekhondi elide kakhulu, futhi i-Ask ayitholakali ndawo.
Nov 29, 2007 ngo-9: 54 AM
Ngisanda kuthola le bhulogi manje… kodwa izinto ezinhle!
Mar 6, 2008 ku-10: 47 PM
Ngiyazi ukuthi le yindatshana yakudala, kepha bengifuna nje ukukwazisa ukuthi ngikuthole ngo-sk.com! Kuyahlekisa, akunjalo?
Ngisebenzisa Ask.com lapho ngifuna okuthile okucacisiwe. Ngasizathu simbe bahlala bengikhombisa indlela efanele.
Mar 7, 2008 ku-10: 36 AM
Kuhle ukuzwa! Ngisanda kufunda lokho Buza icisha abanye abantu futhi icabanga ukusebenzisa iGoogle - kepha impendulo ukuthi injini yabo inhle kakhulu emibuzweni ethile. Angikusebenzisanga kakhulu, kepha ngizwe izinto ezinhle kumqondo nakuma-algorithms okususelwe enjinini yawo.